Thwebula HTC Sync 3.3.63 – Vessoft
Thwebula HTC Sync
HTC Vumelanisa – a software ukusebenza Smartphones kusukela HTC Corporation. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukuvumelanisa amafayela emidya ezahlukene, oxhumana nabo ifonibhuku noma isiphequluli amabhukumaka phakathi kwekhompyutha yakho kanye ifoni. HTC Vumelanisa kwenza ukwakha umtapo umculo, ukuhlela amafayela emidya albhamu, usike izithombe, Ukukopisha uhlu lokudlalwayo kusuka iTunes njll software iqukethe amathuluzi ukusetha i ukuvumelanisa okuzenzakalelayo idatha yomuntu siqu uma oxhumanisa ucingo ukuze computer. HTC Vumelanisa futhi ikuvumela ukuba adale noma ukubuyisela amafayela yokusekelayo of iTunes on the phone.
Data ukuvumelana phakathi kwefoni nekhompyutha
Ukuxhumana nge iTunes uhlu lokudlalwayo
Ukubeka up ukuvumelanisa okuzenzakalelayo
Amazwana on HTC Sync:
HTC Sync Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... Kingo ROOT 1.5.0.2927
Hambayo Isofthiwe ukunikeza amalungelo kwezokuphathwa yimiphi imisebenzi idivayisi Android ngaphandle kokuvinjelwa of a producer. Isofthiwe isekela amadivaysi ezivela abakhiqizi ezahlukene.
Hambayo Isofthiwe ukulawula uhlelo ifayela futhi isici usethe of Android-kumadivayisi. Ikhono thwebula izicelo kanye imidlalo amasevisi anhlobonhlobo online.
English, Français, Español, 中文... Sony PC Companion 2.10.303
Hambayo The kulula ukuyisebenzisa Imenenja yefayela of the Sony amadivaysi. Isofthiwe isekela update kwezicelo kanye uhlelo yokusebenzisa yedivaysi.
English, Français, Español, Deutsch... Sharepod 4.2
Hambayo Isofthiwe ukuze uthumele amafayela omculo, ama-video noma Izinhl zam phakathi iPhone, iPod, iPad and computer zombili izinkomba.
English, Français, Español, Deutsch... SnapPea 2.76.0.6535 futhi 3.0.1.867 beta
Hambayo Isofthiwe ukuphathwa okuqukethwe amadivayisi Android. Futhi kusekela exchange of amafayela kanye idatha isipele zedivayisi.
iTools 3.2.1.0 International; 1.8.4.5 futhi 3.3.0.2 Standard
Hambayo Umphathi iPod, iPhone and iPad amadivaysi. Isofthiwe isekela zonke izinguqulo atholakale uhlelo lokusebenza iOS.
K-Lite Codec Pack 12.7.5 Full, Basic, Standard futhi Mega
Codecs Isethi amakhodekhi ukucabanga ngetakhiwo wanamuhla amafayela alalelwayo video. Isofthiwe inikeza ukuhambisana phakathi amakhodekhi futhi kwenza ukuba oyifisayo ukumisa kwabo.
Carambis Software Updater 2.3.0.5412 Pro futhi 2.0.0.1322 Standard
System nokwenza Ithuluzi universal ukuthola izinguqulo ezintsha software efakwe. I Umbuso ngempumelelo aqalaze system yakho bese ubonisa uhlu software Kunconywa zokuvuselela.